အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. - ဂျင်း, သားရေ, သားမွေး, ပါးပျဉ်း, သောဦးထုပ်, ပဝါ, ဖိနပ် fit?
အနီရောင်ထဲမှာဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူအမျိုးသမီးပုံများကိုစတိုင်ဓာတ်ပုံများတစ်ရွေးချယ်ရေး - အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကနေ
သငျသညျအဝတ်အစား၏ထိပ်ကို select အခါ, များစွာသောမိန်းမသင့်ရဲ့ image ကိုအချို့အရောင်ထပ်ထည့်ချင်တယ်။ မကြာခဏဤကိစ္စတွင်အတွက်ရွေးချယ်မှုအမြဲယင်း၏ပိုင်ရှင်အာရုံကိုဆွဲယူသောတောက်ပအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်တွင်ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါကမော်ဒယ်သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေမှန်ကန်စွာဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုသိကအရမ်းစတိုင်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
မေးခွန်း, အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာသည်အဆင်းလှသောလိင်များစွာသောကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူ့ဟာသူ, ဒီအရာသည်အလွန်တောက်ပသောမှတ်မိလွယ်တဲ့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်, ဒါကြောင့်တခြား "ဆွဲဆောင်မှုရှိသော" အရာနှင့်ဝတ်ဆင်မရနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်ပုံရိပ်အပေါငျးတို့သညျအခွားအစိတ်အပိုင်းများလည်းဟန်ဆောင်နှင့်ညံ့ဖျင်းသောမကွညျ့ဖို့, အဖြစ်ယူထားတဲ့နှင့် laconic ဖြစ်သင့်သည်။ ဤအတောအတွင်း, အနီမအားလုံးအရိပ်အတူတူပင်ကြည့်ရှုပါ။
အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်. တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်တစ်ဦးချင်းဦးစားပေး၏လူမှုရေးအခြေအနေ, အမျိုးအစားကပိုမိုလွယ်ကူသည်အခြားအရာနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်စေမည်ဖြစ်သောပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသို့မဟုတ်ကျောခိုင်းထားသောအရောင်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မကြာခဏမေးခွန်း, အဘယျသို့အနီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်, ချမ်းရာသီအတွင်းအမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဓိကစိန်ခေါ်မှုများဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောနေကြသည် - ဤအစိတ်အပိုင်းဖက်ရှင် look'a ၏သဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စှဲကအခြားသူတွေအပေါ်တစ်ဦးဆုရှင်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဂျင်း၏ဖန်ဆင်းပြင်အဝတ်အစားရှည်မင်းသမီးနှင့်အတူပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်နည်းပညာများတောက်ပနှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲအပါအဝင်အရောင်မျိုးစုံအတွက်ဒီပစ္စည်းကိုဆေးထိုးခြင်းမှခွင့်ပြုပေးပါသည်။ တစ်ဦးအေးမြနွေရာသီနေ့၌လမ်းလျှောက်နေစဉ်ဥပမာအားဖြင့်, ဂျင်း၏တိုတောင်းသောအနီရောင်အကျီကိုသင်အဝတ်အစားမပါဘဲအီခံစားရနိုင်သည့်အခါ, ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင်အများဆုံးကိစ္စများတွင်သဘာဝအသားမွေးသို့မဟုတ်သိုးသဖြင့်ဖြည့်ဆည်းသော, အထူနံရံနှင့်အတူလျှပ်ကာမော်ဒယ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ options နှစ်ခုစလုံးဂန္နှင့်အတူဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ ကိုဆင်းကျဉ်းနှင့်အနက်ရောင်ဘောင်းဘီရှည်။ အဆိုပါဂျာကင်အင်္ကျီအောက်မှာဤကိစ္စတွင်အတွက်ထိုးပြီးဆွယ်တာအင်္ကျီ, ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ် turtleneck ဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြု - ရွေးချယ်မှုရာသီဥတုနှင့်လေထုအပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဖိနပ်အဘို့အကြောင့်နီးပါးမဆိုရှိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သားမွေးနှင့်အတူစီတန်းနေတဲ့အနီရောင်အရှည်လျားဂျာကင်အင်္ကျီသားမွေးတိ, uggami သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဘွတ်ဖိနပ်တွေနဲ့ဘွတ်ဖိနပ်နဲ့အစု၌ကြီးသောကြည့်ရှုမည်။ ပေါ့ပါးနွေရာသီဗားရှင်း Sneaker, Sneaker, moccasins နှင့်အပြားဘဝါးနှင့်အတူအခြားအဆင်ပြေဖိနပ်နှင့်အတူကောင်းစွာတတ်၏။ ပုံသဏ္ဌာန်, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးအတူပြီးစီးစေခြင်းငှါ - ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာပို, ဣတ္ကြော့နှင့်ရင်ခုန်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ပင်ထိုကဲ့သို့သောတောက်ပအရောင်အရိပ်ထဲမှာသားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးများအလွန်ကြော့နှင့်သန့်စင်ပြီးရှာဖွေပါ။ ကတင်းကျပ်နှင့် laconic ဝတ်စုံ, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်စီးပွားရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒီတော့သားမွေး-ဆောင်သောတိရစ္ဆာန်များ၏သားမွေးလျနှင့်အတူအနီရောင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသားရေဂျာကင်အင်္ကျီ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမြိုးသမီး၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပေမည်။
လမ်းပေါ်စတိုင်အဝတ်အစားပိုနှစ်သက်သူကိုငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ, biker ဒီဇိုင်းအတွက်မော်ဒယ်ဖို့ preference ကိုပေးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်၏အနီရောင်သားရေဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုအံ့သြ, ဤဗီရိုပစ္စည်းများပိုကောင်းတဲ့တိုတောင်းအရှည်ရှိသည်ကိုအောက်မေ့ရပါမည်, ဒီတော့သူတို့ဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားရမည်။
သားမွေးတိအမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗီရို၏အရာဝတ္ထုမယုံနိုင်လောက်အောင်သန့်စင်ပြီးနှင့်ဇိမ်ခံဖြစ်ပါသည်, ပင်အများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သားမွေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီ - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းတောက်ပြည့်အရောင်များနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်စီးပွားရေးနှင့်ရင်ခုန်စရာလှပသောအမျိုးသမီးများအတွက်ဿုံသင့်လျော်နေကြသည်, သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့စတိုင်များ၏အဝတ်နှင့်ဆင်မြန်းနှင့်အတူကောင်းစွာပေါင်းစပ်နှင့်မည်သည့်ကိုအလှဆင်နိုင်, ပင် ညဥ့်ပုံရိပ် ။
ဤအတောအတွင်းအနီရောင်အရောင်နှင့်၎င်း၏အများအပြားအရိပ်နှင့်အတူသားမွေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်ကြဘူး။ တစ်မူထူးခြားတဲ့အရောင် feature သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသားမွေးအရေခွံ, ငွေရှိ fox, ဆင်ခြင်၏။ ထူးခြားမီးခိုးရောင်အမွေး၏အခြားအမျိုးအစားများ, အဝါနုရောင်ရှိသော, အဖြူနှင့်အပြာအရောင်အစီအစဉ် fit ။
လွပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းအနီရောင်အမျိုးသမီးများနေ့ဂျာကင်အင်္ကျီ, - ဆောင်းတွင်း, နွေဦးနဲ့ဆောင်းဦးကာလများတွင်နေ့စဉ် wear များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု။ များစွာသောမိန်းမဒီ option ကိုပါးလွှာအလှအပအတွက်သာသင့်လျော်ကြောင်းယုံကြည်သော်လည်း, တကယ်တော့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်မည်သည့်ဖက်ရှင်, ဘာပဲက၎င်း၏အသားအရေ, သင်ကဖက်ရှင်ပုံရိပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်မှုနှင့်အတူမှားခံရဖို့မဟုတ်, အနီရောင် dutuyu ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အရာကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
ဂန္အပြာရောင်, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ - "Pouter" အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုခြားနားအရောင်၏တင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ကိရိယာအစုံကြိုးကိုနှင့်အတူအဆင်ပြေဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီနေ့ "ချယ်လ်ဆီး" ကောင်းမကောင်းဖက်ရှင်ဘွတ်ဖိနပ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးနှင့်အတူဖိနပ်ကြောင့် - ဤအမှု၌ကထိုမှတပါးလည်းသင့်လျော်သောဖြစ်နှင့်မည်မဟုတ်သိသာအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အဝတ်တန်ဆာများကဲ့သို့အဝတ်နှင့်ဆင်မြန်းလည်းပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ, သို့သော်, ကသာခြွင်းချက်မော်ဒယ်လျောက်ပတ်သည်။ ဒီတော့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းအတွက်ဘာအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ရန်, stylist ထူးခြား outerwear ၏ဤအရာနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သူမ၏စားဆင်ယင်၏စကတ်သို့မဟုတ်အနားတွေ့ဆုံရန်ရှိသင့် တဲ့ trapezoidal ပုံသဏ္ဍာန် နှင့်ကြားနေအရောင်အရိပ် - မီးခိုးရောင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါနုရောင်ရှိသော။
ယွန်းမျက်နှာပြင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီ - လှပသောမင်းသမီး၏ဗီရို၏ထိပ်မှအများဆုံးအံ့မခန်းတ္ထုများထဲမှ။ ဒီထုတ်ကုန်များအတွက်ဖက်ရှင်ပုံရိပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုကောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်, သို့သော်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Win-Win options တွေကိုဆက်ဆက်လည်းမရှိ:
တင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီ, ဆွယ်တာအင်္ကျီထိုးပြီး ယွန်းမျက်နှာပြင်နှင့်ဘွတ်ဖိနပ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဖိနပ်, ဘွတ်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်ခွင့်နှင့်မော်ဒယ်ပြင်အဝတ်အစားကိုက်ညီသော်လည်း, အနက်ရောင်အတွက်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏;
မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်, နိုင်လွန်တင်းကျပ်စွာသား Tone နှင့်အဆင်ပြေ moccasins ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်အတွက်ဖြောင့် mini ကိုစကတ်။ အေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုမှာတော့ဒီပုံကိုအနီရောင်ထိုးပြီးခြေအိတ်တွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ;
မြင့်မားသောထိပ်များနှင့်အတူမီးခိုးရောင်နဲ့အနက်ရောင်ဘွတ်ဖိနပ်အတွက်စားဆင်ယင်ထိုးပြီးသို့မဟုတ်ဇာထိုးပန်းထိုး။ မေးခွန်းဖြေဆိုခြင်းအတွက်, ဤ version ကိုအများဆုံးဦးစားပေးတစ်ဦးအဘယ်အရာကိုမူပိုင်သားရေများအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအရမ်းအထင်ကြီးခြင်းနှင့်ကြော့ကြည့်နီးပါးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်သင့်လျော်သောနိုင်ပါတယ်။
ပါးပျဉ်းနှင့်အတူစတိုင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့အနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီ - အားလုံးရာသီဥတုအခြေအနေအဘို့ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှု။ ဒါဟာလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုအဘို့, အလုပ်မှာသို့မဟုတ်မြို့တွင်းထဲကစျေးဝယ်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် outerwear တစ်လောကလုံးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ၏အဝတ်အစား၏ဆောင်းပါးနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီတော့တစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဘာမေးခွန်းဖြေဆိုရန်:
ဒီထုတ်ကုန်၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌အကောင်းဆုံးပြားဘဝါးတွေနဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီ, ထိုးပြီး pullover နှင့်အဆင်ပြေဖိနပ်နဲ့ပေါင်းစပ်လျက်ရှိ၏
သင့်လျော်သောဘောင်းဘီနှင့် - ကပြိုင်ကားဆန်သောစတိုင်အဝတ်နှင့်အတူဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်း hoodies ။ ဒီပုံကိုဖြည့်စွက်ဖို့ကျနော်တို့ Sneaker သို့မဟုတ်ပြေးဖိနပ်အကြံပြု;
ဂန္တစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီပါဝင်သည်ဟုစုံလင်သောကိရိယာအစုံ, ဂန္အင်္ကျီနှင့်ထိုးပြီးအဝတ်ဖြောင့် silhouette ၏ပန်ကာ။ အလားတူကြည့်ပိုပြီးဣတ္စေရန်, ကဒေါက်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးအတူဖိနပ်ဖြည့်စွတ်ရန်အကြံပြုသည်။
အနီရောင် Jacket ပန်းခြံ
အနီရောင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့အရှည်လျားဂျာကင်အင်္ကျီပန်းခြံအစင်းများနှင့် svitshotom နှင့်အတူ leggings သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီနှင့်အတူအကောင်းလှပါတယ်။ image ကိုပိုမိုတောက်ပနှင့် Express အောင်မြင်ရန်ကအဝတ်အစားတွေနဲ့အဆင်ပြေကျောပိုးအိတ်ကိုက်ညီ Sneaker သို့မဟုတ်ပြေးဖိနပ်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်, ဒီမော်ဒယ်ဿုံတင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်လယ်ထွန်စက်ဘဝါးပေါ်မှာအနက်ရောင်ဖိနပ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပိုများသောဣတ္နှင့်ကြော့မော့ကြည့်နေတဲ့ခဲတံစကတ်, အင်္ကျီများနှင့်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်အတူတစ်ဦးချွန်ထက်သောနှာခေါင်းနှင့်အတူတိကျခိုင်မာစွာမြင့်မားသောဘွတ်ဖိနပ်နှင့်တသားတပုံတွင်တစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီ-ပန်းခြံပေါင်းစပ်ပြီးဖြင့်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။
မိန်းကလေးအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားပါကဂရုတစိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်မှုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ မကြာခဏကဤအသေးစားအသေးစိတ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုပုံရဲ့ခံစားချက်နှင့်အထင်အမြင်အပေါ်တစ်ဦးအလွန်အားကောင်းတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအခြားသူတွေအပေါ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေးပါ။ ဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့, stylist သည့် accessories များအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဘာအသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များ၏နံပါတ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
မေးခွန်းတစ်ခုကအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီထံသို့လာလတံ့သောအရာကိုအရောင်ဦးထုပ်, အခက်ခဲဆုံးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦး option ကို outerwear ကိုက်ညီဖို့ဦးထုပ်၏ရွေးချယ်ရေးဖြစ်စဉ်းစားသည်, သို့သော်, up ပြုလုပ်ကောက်ဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်။ သင်သည်အခြားထုပ်ကို select ပါလျှင်တစ်ဦးဖက်ရှင်ပုံရိပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအရောင်အစီအစဉ်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းရပါမည်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးအပြာဂန္ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားလျှင်ဥပမာ, ကသင့်ရဲ့ image ကိုအပြာ headdress ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတင်းကျပ်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်စုံမီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဦးထုပ်နှင့်တောက်ပဣတ္ဆင်မြန်း့အဖြူဆက်စပ်ပစ္စည်း Beige သို့မဟုတ်မုန့်အရောင်အဆင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းဦးထုပ်ပြီးသားဝယ်ယူသည့်အခါအနီရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီအောက်မှာပဝါကိုရှေးခယျြရမညျ။ တူညီသော accessories များကြီးမြတ်စုံကိုကြည့်ရှုလော့, သို့သော်, ဒီဦးထုပ်ပြင်အဝတ်အစားကိုက်ညီဖို့ရှေးခယျြသည်အဘယ်မှာရှိမှုလျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးအခြေအနေတွေမှာ, သင်တစ်ဦးအနီရောင်သေံခြေရာခံရာ, တစ်ရောင်စုံပဝါသို့မဟုတ် LIC ကောက်လို့ရပါတယ်။
ဂျာကင်အင်္ကျီတောက်တောက်နဲ့အသံတိတ်နှစ်ဦးစလုံးကြားနေအရိပ်ရှိသည်နိုင်သောဖိနပ်အများစုကိုမော်ဒယ်များနှင့်အတူကောင်းစွာသဟဇာတနီ။ ဖိနပ်, ရှူးဖိနပ်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အတူပြင်ပအဝတ်အစားတစ်ဦးဂန္ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, တစ်လောကလုံးအရောင်များ - အဖြူအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါနုရောင်ရှိသော။ မြေတပြင်လုံး image ကိုပျော့အရောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်ဆိုပါကဖိနပ်အထက်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဲ့သို့တူညီသောအရောင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုကိုနှင့်အတူအနီရောင်အသားရေဂျာကင်အင်္ကျီ၏အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပေါင်းစပ်ကြည့် ဖိနပ် သို့မဟုတ် moccasins အဝါရောင်သို့မဟုတ် Emerald အစိမ်းရောင်အရောင်နှင့်ကျားသစ်ပုံနှိပ်အတူ။
ဂျော်ကီဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
တစ်ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ပဝါဝတ်ဆင်ဖို့ကိုဘယ်လို - စတိုင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပုံရိပ်တွေတစ်ရွေးချယ်ရေး
ဆံပင်အရောင် - tsvetotip နွေရာသီ
မျက်နှာကျက် plasterboard ပန်းချီ
အသည်းနာကျင် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
အမျိုးသမီးများနေ့ cashmere အင်္ကျီ
ပန်ကင် - ချက်ပြုတ်နည်းများချက်ပြုတ်
ကောက်မုန့်ညက်ထံမှ Kvass sourdough
ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံ၏ဤ pair တစုံကိုတစ်ကြိမ်အင်တာနက်ကိုဖွင့်မှုတ်, ယနေ့သူတို့သည်နောက်တဖန်ပြောနေတာစတင်